လှောင်ချိုင့်တံခါးတွေ ရိုက်ချိုးကြဟေ့ (ရဲရင့်သက်ဇွဲ) | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
လှောင်ချိုင့်တံခါးတွေ ရိုက်ချိုးကြဟေ့ (ရဲရင့်သက်ဇွဲ)
June 14, 2008, 2:35 am Filed under: DawAungSanSuKyi, Poems ပြည်သူလူထုများ၏ မေတ္တာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ နီးကပ်လာတာနှင့်အမျှ ကျွန်မမေးလ်ထဲမှာလည်း သူမအတွက် မေတ္တာများဖြင့် ရေးသားထားကြသော ကဗျာမေးလ်တွေလည်း အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့ခ်ပေါ်မှာ တင်စေချင်ရုံသက်သက် ပို့လာပေးတဲ့ ကဗျာအချို့ကို ဖော်ပြပေးရင်း မအားလပ်မှုများကြောင့် ဖုန်တက်နေတဲ့ ကျွန်မဘလော့ခ်လေးကို ပြန်အသက်သွင်းလိုက်ရပါတယ်။
မြန်မာ့သမိုင်းတလျှောက်အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်မှာသူ့ထက်ဆိုးသူတောင်မှသူ့လောက်မဆိုးခဲ့ကြဘူးအဲဒီလူပေါ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ တံတွေးခွက်ထဲပက်လက်မျောသူတိရစ္ဆာန်လိုလူတယောက်အာဏာမက်စိတ်က တောင်လိုမောက်နေပုံများ … ။ဘ၀ရဲ့ ဆည်းဆာချိန်တိမ်တောက်တောက်ထဲမှာထွေးပြီးသား တံတွေးတွေ ပလုတ်ပလောင်းနဲ့သွေးရူးသွေးတမ်း အမိန့်ပြန်တမ်းတွေထုတ်အမေ့ကို နောက်တနှစ် အကျယ်ချုပ်တဲ့တံတွေးခွက်ထဲကအကောင် ပေးတဲ့အမေ့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် .. ။
တကမ္ဘာလုံး ၀က်ဝက်ကွဲပါပဲအမေ့အတွက်ဝမ်းနည်းကြောင်းစိတ်မကောင်းကြောင်းသတင်းစကားတွေသ၀ဏ်လွှာတွေထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေ ပလူပျံလို့တနှစ်တခါ တောချောက်သံလားတောလဲသံလားပြီးတော့လည်း ပြီးသွားတာပါပဲအမေ့လွတ်မြောက်ရေးဟာလေနဲ့အတူလွင့်မျောသွားခဲ့အမေ့စိတ်တခုသာသံမှိုကျောက်ဆောင်တခုအလားပိုမိုမာကျောကျစ်လစ်လာခဲ့တယ် .. ။
အမေ့ရဲ့ဒုက္ခဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ ဒုက္ခသာလျင် အမေ့ရဲ့ ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုအတွက် အမေ့ရဲ့အသက်ကိုပေးထားပြီးသားမို့အမေ့ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓါတ်အင်အားအောက်မှာတံတွေးခွက်ထဲကကောင်တွေတနေ့ ဒူးထောက်ကြရမယ်ဆိုတာ သားတို့ယုံတယ် .. ။
ကံကြမ္မာရေ ..ရက်စက်မှုအပေါင်း သရဖူမဆောင်းလိုက်ပါနဲ့အမေဟာခေတ်သစ်ဗမာပြည်သမိုင်းရဲ့ ကောင်းကင်မှာထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့ လမ်းပြကြယ်ဖြစ်တယ်အမေဟာပြည်သူလူထုကြီးဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့သွေးကအမေ့ကိုယ်ထဲ လှည့်လည်စီးဆင်းတယ် … ။
ကမ္ဘာကြီးရေ ..ဗမာပြည်ကြီးရေအမေ့ကို ချစ်သူ မုန်းသူများအားလုံးအားအမေ့ကိုယ်စားငါတို့က ကျေးဇူးစကားဆိုပါရစေ .. ။
အမေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လှောင်ချိုင့်တံခါးတွေ ရိုက်ချိုးကြဟေ့ .. ။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်. (၆၃) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရ)
with so…so strong words…great poem
June 19, 2008 @ 6:06 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI